Xildhibaannada Golaha Shacabka oo ballan-qaaday in codka kalsoonida ay siin doonaan wasiirrada cusub – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo ballan-qaaday in codka kalsoonida ay siin doonaan wasiirrada cusub
October 21, 2020 Hassan Istiila
Wasiirradii dhowaan uu magacaabay Ra’iisul wasaaraha Jamhuuriyada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xalay kulan la qaatay qaar kamid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur-Galbeed.
Xildhibaannada ayaa Golaha cusub ee wasiirrada ugu hambalyeeyay xilalka cusub, iyadoo muddo ka yar 6-bilood ay ka dhimanyihiin muddo-xileedka hay’addaha dowladda.
Wasiirka cusub ee cadaalada Abdulkadir Mohamed Nur oo kulanka ka qeyb-galay, ayaa sheegay in xildhibaannadii ay la kulmeen ay u ballanqaadeen in codka kalsoonida ay siin doonaan, marka Golaha Shacabka la keenno wasiirrada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa shalay ka codsaday Guddoonka iyo Xildhibaannada Golaha Shacabka ansixinta Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble, si loo dardar geliyo howlaha muhiimka ah ee horyaalla Golaha Xukuumadda, loona gaarsiiyo dalka doorasho hufan oo wakhtigeeda ku qabsoonta.
Prof Jawaari oo tababar ku saabsan maareynta howlaha Baarlamaanka siinaya xildhibaannada Koonfur-Galbeed